16/01/2018 - 10:00 : FAMPIANARANA: 45 000 ny mpampianatra FRAM mbola tsy voaray ho mpiasam-panjakana raha toa ka 85 000 izany tamin'ny 2014, ary 4000 kosa no horaisina amin'ity taona ity, hoy ny Minisiteran'ny fanabeazana.
16/01/2018 - 09:30 : MIALITIANA CLERC: Natsangana mpivady frantsay, izay mpilalao ski izy teo amin’ny fahaherintaona sy tapany ary nipetraka any Frantsa hatramin’izao, ka ka dia mizaka ny zom-pirenena frantsay sy milalao any Frantsa aza izy dia nisafidy ny hiaro ny voninahi-pirenena Malagasy.
16/01/2018 - 09:15 : LALAO OLIMPIKA: Tovovavy iray16 taona antsoina hoe Mialitiana Clerc no hisolo tena an’i Madagasikara eo amin’ny taranja Ski, amin’ny lalao olimpika atao any Korea Atsimo amin’ny volana febroary izao.
16/01/2018 - 09:00 : VEHIVAVY NAONDRANA TANY SINA: Vehivavy mihoatra ny 400 no efa lasibatry ny tambajotra tarihin'i Mina nanomboka ny taona 2014 ary vola manodidina ny 24 tapitrisa ariary isaky ny vehivavy no alain'izy.
16/01/2018 - 08:45 : FANONDRANANA OLONA MAKANY SINA: Vehivavy antsoina hoe Mina na Emilienne izay lehiben'ny mpanondrana vehivavy Malagasy any Sina. Tamin'ny herinandro izy no naverina teto rehefa nialokaloka tany Sina nandritry ny 5 taona.
16/01/2018 - 08:30 : SIDINA ANTSIRANANA-NOSY BE: Mpandeha Réunionais 20 sy olon'i Nosy Be 06 no hisantatra ity sidina an'habakabaka voalohany hampifandray ny tanana roa tonta ity anio.
16/01/2018 - 08:15 : FITATERANA AN'HABAKABAKA: Hotokanana anio any amin'ny Seranampiaramanidina Arrachart, Antsiranana ny sidina vaovaon'ny Air Madagascar mampifandray an'Antsiranana sy Nosy Be.
16/01/2018 - 08:00 : FANADINAM-PANJAKANA: Nanomboka omaly 15 janoary hatramin'ny 15 mattsa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana BEPC 2018.
15/01/2018 - 16:00 : ANDOHATAPENAKA: Rangahy iray sahabo ho 30 taona no vaky loha tanteraka amin'izao fotoana eny Ambodimita,vokatry ny ady teo aminy sy ny namany. Marihina fa samy mamo ny roa tonta.
15/01/2018 - 15:30 : JIRAMA: Mety hisy fiakarany koa ny vidin’ny rano izany hoe raha vidiana 395 Ariary ny 1 metatra tora-3 dia mety ho vidiana 1000 Ariary zany.
Archive du 20161213
Marc Ravalomanana Hamerina ny hambom-po Malagasy
Lanonana roa sosona no tontosa teny amin�ny Tiko Tanjombato omaly. Fankalazana ny andron�ny 12 desambra fahatsiarovana ny tsingerintaona nahaterahan�ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc sy fisokafan�ny tranombarotra
Depiote TIM Tsy hanaiky ny fanilihana an�i Dada
Volavolan-dal�na goavana hiadian-kevitra eny amin�ny lapam-panjakana Tsimbazaza amin�izao fotoana izao ny momba ny fampihavanam-pirenena, hoy ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Razafimanantsoa Hanitra.
Vondrom-bahoaka Hofehezin�ny didim-panjakana vaovao
Ny taona 1999 no nivoaka voalohany ny didim-panjakana momba ny fikambanan�ireo vondrom-bahoaka eto Madagasikara.
Depiote TIM Boriborintany faha-6 Tsy mitsahatra mihetsika manaraka ny torimarik�i Dada
Tsy mitsahatra mihetsika manaraka ny torimarika homen�i Dada ny depiote TIM voafidy teny amin�ny Boriborintany faha-6 eto Antananarivo Renivohitra, Rasoanoromalala Marie Horace amin�ny fijerena manokana sy fitsinjovana sy fanampiana mivantana ny mponina eny amin�ity faritra nahalany azy ity.
� PV � tamin�ny fifidianana Filoha Nisy namoaka, lasa famonosana mofogasy
Mbola azo hanaporofoana ny fisian�ny gaboraraka amin�ny fomba fitantanana eto Madagasikara indray ny tranga niseho tamin�ny faran�ny herinandro teo. Hita teny amina mpivarotra hani-masaka ny taratasy ofisialy nampiasain�ny CENI-T tamin�ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013.
Taratasin�i Jean Misambotsambotra
Miarahaba anao indray ny tenako ry Jean akama ! Miala amin�ny mihevotrevotra sy mitsambomboatra izany ianareo dia miditra amin�ny misambotsambotra indray ankehitriny a ! Mahita atao koa aloha ianareo ireto e !
Sakafo amidy eny an-tsena Ho hentitra ny fanaraha-maso
Ho hentitra ny fanaraha-maso amin�ireo sakafo amidy eny an-tsena amin�izao ankatoky ny fety izao, raha ny fanazavana azo avy eo anivon�ny ASCQDA
ASSOCIATION MADAGASCAR SAVE Manohitra ny fanavakavahana ireo voan�ny SIDA
Betsaka ny olana sedrain�ireo olona mitondra ny otrikaretina VIH SIDA ankehitriny eny anivon�ny fiarahamonina eny.
Antsirabe avaratra Toherin�ny vahoaka ny fametrahana ilay �Pylone�
Tsy maharesy lahatra ny mponina mihitsy ny fanazavana sesilany momba ireny fametrahana pylone na andry vy goavam-be ho an�ny fifandraisan-davitra ireny.
Hopitaly Befelatanana Nahazo "couveuse" vaovao
Mahatratra 32,61 % ny tahan'ireo zaza teraka eto amintsika isan-taona ho an'ny mponina miisa 1.000.